Bona kwakhona inqaku eliphambili le-Apple elidlulileyo kwi-WWDC 2017 | Ndisuka mac
Ngeli xesha ebelindile, kodwa Sele sinombiko ophambili okhoyo esikonwabele ngoMvulo odlulileyo. Iqela likaSoy de Mac lenze uqeqesho olupheleleyo emva kwemvulo yangoMvulo, ehambisa izinto ezintsha ezazivelisiwe, kunye nokubonakala okwakuthathwe kwiimveliso ezintsha zeApple. Asazi ukuba iya kuba yenye yezona zinto ziphambili ezingalibalekiyo kuApple, kodwa ubuncinci iya kuba yenye yezona zibalulekileyo ngezizathu ezininzi.
Kwakungokokuqala kwiminyaka ukuba I-Apple ivuselele iHardware. Ngeli xesha saziswa Iinguqulelo ezintsha zeMac neMacBook kunye neMacBook Pro, kodwa kwakhona, wakhupha izixhobo ezitsha, ezinjengeMac Pro, i10,5 ″ i-iPad okanye iPodPod yasekhaya, Isithethi esitsha se-Apple esinomdla wokwazi ukusebenzisana esinaso neeMacs zethu. Kodwa kwakhona, siyibonile into elungiselelwe yiApple ngokunxulumene ne RA.
Elinye lamahemuhemu lijikeleze ukuba kungenzeka ukuba iApple itshintshe isantya kunikezelo lweemveliso ezintsha. Kude kube ngoku, ukuboniswa kwemveliso kugxile ikakhulu kwiinyanga zikaSeptemba ukuya kuMatshi. Ukuba iqinisekisiwe, I-Apple iya kuthathela ingqalelo ukubonisa ibhetri yeemveliso ekuqaleni konyaka eziya kubakho unyaka wonke kunye nomgama ngamnye kubo ukukhutshwa kwintengiso malunga neenyanga ezimbini. Ngale ndlela, siya kuba neendaba ezivela ku-Apple unyaka wonke.
Sicebisa ukuba ujonge imva kwemini yasimahla, njengoko umboniso uqhubeke phantse iiyure ezimbini nemizuzu engamashumi amabini. Nangona kunjalo, ndiqinisekile ukuba awuzukruquka, kwaye awuzukuqhwanyaza okomzuzwana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Bona kwakhona inqaku eliphambili le-Apple elidlulileyo kwi-WWDC 2017 edlulileyo